Sheekada Filimka Touch Chesi Choodu: Ravi Teja Action wacan ayuu la yimid laakiin fariin cusub ma sameynin – Filimside.net
Super star-ka reer Telugu ee looga haray mada daalinta daawadayaasha Mass Maharaja Ravi Teja waxaa tiyaatarada loo saaray filimka Action-ka ee lagu magacaabo Touch Chesi Choodu.
Jilaayaasha filimkaan: Ravi Teja, Rashi Khanna, Seerat Kapoor, Freddy Daruwala
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 27-daqiiqo
Qiimeynta fariinta filimkaan: 2/5
Sheekada Filimka Touch Chesi Choodu Oo Kooban: Karthikeya (Ravi Teja) waa ganacsade qoyskiisa la nool, marwalbana wuxuu ahmiyada kowaad siiyaa farxada iyo rabitaanka qoyskiisa.
Wuxuuna go’aan ku gaaraa inuu qoyskiisa dartiis u guursado gabadha uusan jecleyn Pushpa (Raashi Khanna) iyadana markii dambe si tartiib ah ayay u jeclaaneysaa, laakiin markii dambe gadaal ayuu ka diidaa inay noloshooda sii jirto sabab qoyskiisa la xariirto oo ah inuu sharafkooda ilaaliyo.
Karthikeya (Ravi Teja) wiilkiisa ayaa arkaayo ama marqaati ka noqonaayo kiis dil ah kadibna wuxuu tagaa saldhiga asigoo meesha ka ogaanayo dilkan inuu la xariiro nin Irfan la dhaho oo horeyo loo waayay.
Karthikeya (Ravi Teja) wuxuu la kulmaa taliyaa ciidanka Police (Murali Sharma) si uu wax kaga weydiiyo waa kuma Irfan, maxay yihiin dadka wiilkiisa iyo asiga halista ku ah? iyo waxa ka dambeeyo kiiskan dilka ah?
Bandhiga Jilaayaasha: Ravi Teja marnaba kuma caajis galinaayo doorkiisa Karthikeya bandhig ahaan sida uu Action-ka u sameenayo iyo mada daalo u dheer tahay, weliba labo door ayuu ku matalayaa waji dabacsan oo ah nin qoyskisa jecel iyo wajiga u qarsoon oo ah askari mayal adag.
Rashi Khanna iyo doorkeeda Pushba waa mid wacan waxaana u dheer qurux iyo soo jiidasho dheeraad ah, Murali Sharma door wacan ayuu ku leeyahay sidoo kalena laadariinta filimkaan bandhigooda ma xumo haba ugu horeeyo Freddy Daruwala.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Touch Chesi choodu: Waan ka xunahay wax cusub fariin ahaan laguma soo bandhigin filimka Touch Chesi choodu waana sheekooyinkii waligeed reer Telugu lagu arki jiray.
Kaliya Action-ka iyo hadalada la adeegsanayo ayaa wacan laakiin wax kale oo ku xiiso galinaayo filimkaan kuma arkeysid xitaa taageerayaasha Ravi Teja kuma cesh ceshaan karaan oo halmar ka badan ma daawan karaan ma ahan inuu filim xun yahay laakiin waa fariimahii in badan horey loo arki jiray.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimkaan:
Bandhiga Ravi Teja
Muxuu Ku Liitaa Filimkaan:
Sheekadiisa oo duug ama qadiimi ah
Isku xirka filimkan oo aan heer sare ahayn inta badan
Gunaanad: Touch Chesi choodu waxaa fiicneyd 10-sano ka hor inay mashruucaan sameeyaan markaas Boxoffice-ka wuu gil gili lahaa laakiin fariintaan waa laga dhargay sidaa darteed waa macquul in fagta hore Ravi Teja madaxiisa loo daawado balse mudo dheer tiyaatarada baaqi kuma ahaan karo waana mashruuc halis ugu jiro inuu fashilmo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Touch Chesi Choodu:
horta kuwan koonfur hindiya ma iskusheekuunbay filimada kasameyaan